चितवनमा उत्पादन हुँदै छ ड्राई साइलेज अर्थात् गाईभैँसीको ‘गुन्द्रुक’
- निशा श्रेष्ठ
चितवनमा गाईलाई खुवाइने ड्राई साइलेज अर्थात् ‘गुन्द्रक’ उत्पादन सुरु भएको छ । चितवनको भरतपुर– ६, केशरवागमा रहेको अन्नपूर्ण दुग्ध सहकारी संस्थाले ड्राई साइलेजको उत्पादन सुरु गरेको हो ।
ड्राई साइलेज भनेको विभिन्न घाँस अथवा दुधिलो मकैलाई फेदबाटै काटेर टुक्राटुक्रा पारी पोषणतत्त्व कायम राखी ‘गुन्द्रुक’ झैँ तयार पारिएको एक प्रकारको पशुआहार हो ।
पशुपालक किसानको पकेट क्षेत्र रहेको यो ठाउँमा कम लागतमा बढी उत्पादन गराउने उद्देश्यले व्यावसायिक कृषकका लागि साइलेज उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको सहकारीका व्यवस्थापक करुण पोखरेलले बताए ।
‘किसानलाई दाना, चोकरको मूल्य महँगो पर्ने भएकाले साइलेज खुवाउँदा उत्पादन लागत पनि कम पर्ने अध्ययनपश्चात् साइलेज उत्पादन थालिएको हो,’ उनले भने ‘घाँस लगाउन, काट्न नसक्ने, सहरमा बसेर थोरै जग्गामा पशुपालन गर्न चाहनेका लागि पनि साइलेज उत्तम विकल्प हो ।’
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयसँग ५० प्रतिशत साझेदारीमा उद्योग खोलिएको पोखरेलले बताए । उद्योगमा मन्त्रालय र सहकारीको एक/एक करोडको लगानी छ ।
दुई महिनाअघि उत्पादन थालेको उद्योगले अहिले किसानको बारीमा पुगेर हिउँदे मकैका डाँठसँगै किनेर साइलेज उत्पादन गरिरहेको पोखरेलले बताए । मकैको सिजन सुरु भएकाले चितवन तथा अन्य जिल्लाका किसानलाई पुग्ने साइलेज उत्पादन भइरहेको उनी बताउँछन् ।
प्रतिकेजी १२ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको साइलेज अहिले दैनिक १० टनसम्म उत्पादन भइरहेको सहकारीका अध्यक्ष ऋषिराम चापागाईंले जानकारी दिए । आफूहरूले उत्पादन गरेको साइलेज सिन्धुली, दोलखा, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, मोरङलगायतका जिल्लामा २०० टनभन्दा बढी बिक्री गरिसकेको चापागाईंले बताए ।
साइलेजमा मकैको मात्रा बढी भएको र ४५ दिनसम्म हावा नपस्ने गरी भण्डारण गर्दा प्रोटिनको मात्रा बढ्ने भएकाले गाईभैँसीलाई खुवाउँदा तुलनात्मक रूपमा बढी दूध दिने चापागाईं बताउँछन् ।
साइलेज खुवाइरहेका पशुपालक कृषक उपेन्द्र भण्डारीले यो खुवाउँदा दूधको गुणस्तर बढेको अनुभव सुनाए । 'साइलेज खुवाउँदा दूधमा ल्याक्टोजन र फ्याटमा राम्रो परिवर्तन आएको पाएँ,’ उनले भने, ‘साइलेज खुवाएपछि घाँसको समस्या भएन । दाना चोकरको प्रयोग स्वत: घटेको छ ।’
हरियो घाँसको सट्टामा दानासँग साइलेज खुवाउँदा एउटा गाईले दैनिक दुई लिटरसम्म दूध बढाएको अर्का किसान केशवप्रसाद सापकोटाको अनुभव छ । उनका अनुसार दैनिक उन्नत जातको गाईलाई दाना र चोकरसँग मिसाएर दैनिक ८ देखि १० केजीसम्म साइलेज खुवाउन सकिन्छ ।
साइलेज के हो ? कसरी बनाइन्छ ?
साइलेज बनाउने प्रक्रिया र यसको प्रकृति गुन्द्रुक तथा सिन्कीसँग मिल्दोजुल्दो रहेको सहकारीका अध्यक्ष चापागाईं बताउँछन् । ‘घरमा आमा-हजुरआमाहरूले रायोको सागको गुन्द्रुक बनाउँदा जसरी एउटा भाँडोमा खाँदेर राखी त्यहाँ अक्सिजन छिर्न दिनुहुन्न र त्यो केही समयपश्चात् अमिलो बनेपछि घाममा सुकाएर गुन्द्रुक तयार हुन्छ, त्यसैगरी विभिन्न घाँस तथा मकै प्रयोग गरी खाडलमा खाँदेर अथवा प्लास्टिकमा र्‍यापिङ गरी साइलेज तयार हुन्छ,’ उनले व्याख्या गरे ।
साइलेज बनाउँदा विभिन्न घाँस अथवा दुधिलो मकैलाई फेदबाटै काटेर सेर्डरर अथवा हार्बेस्टर मेसिनबाट टुक्र्याइन्छ । त्यसपछि साइलेज मेसिनमा हालेर डल्लो (बेल) बनाएर प्लास्टिकमा र्‍यापिङ गरी भण्डारण गरिन्छ ।
यसरी भण्डारण गरिएको साइलेज गर्मी महिनामा २८ देखि ३० दिनमा खुवाउन सकिन्छ भने चिसो महिनामा ४५ दिनमा खुवाउन सकिने चापागाईं बताउँछन् ।
हरियो घाँसलाई अमिल्याएको (फर्मेन्टेसन) हुँदा हरियो घाँसमा भन्दा ३ प्रतिशत बढी प्रोटिन थपिन्छ । यसबाट गाईभैँसीलाई पोषण पुग्ने, दूधको उत्पादन र गुणस्तर बढ्ने हुँदा कृषकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने अध्यक्ष चापागाईंको दाबी छ ।
तस्वीरहरू : निशा श्रेष्ठ/शिलापत्र
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २३, २०७७, १२:१८:००